Nzira yekugadzira sei backlink profile inobatsira uchishandisa dofollow backlinks generator?
Vose vanoita webhusaiti vanorota kuita bhizinesi ravo rekutsvaga richionekwa kune vanogona kutenga. Ndicho chikonzero ivo vanofambisa zvigadzirwa zvepamusoro zvekutengeserana zvinosanganisira kutsvaga injini yekugadzirisa, kushandiswa kwemashoko ezvehuwandu, kushandiswa kwemashure, nekudaro. Kana iwe une chimwe chinhu chokugovana nevateereri vakawanda, iwe zvechokwadi unoda kuzviita.
Chivakwa chekugadzira chikamu chimwe chezvinhu zvakakosha zvikuru zvekutsvaga injini yekugadzirisa. Kubatanidza kwakakosha kunokosha kuti utaridzire kumusoro pakutsvaga peji peji uye kukoshesa vangave vatengi. Vanoita kuti zvinyorwa zvako zvionekwe kune vateereri vako uye zvinokurudzira bhizinesi rako kudzokera kunekutsvaga.
Kuvaka mazano akawandisa hakusi yesayenzi yesayenzi asi kuwana backlinks kubva kuzviremera zvepamutemo zveP PR zvinogona kuonekwa zvakaoma zvekare. Nenzira yakanaka, kune dzakawanda zvezvesa dofollow backlink generator dziripo pawebhu uyewo search engine optimization vashandi uye vanovaka vavaki, vachakubatsira kuti uwane hutano hwehutano hwakanaka kubva munzvimbo dzakakwirira dzeP.
Muchikamu chino, ndichagoverana newe dzimwe mazano ekugadzira dofollow backlinks pasina. Uyezve, pano uchanowana zvimwe zviripo zvinotevera backlinks nzvimbo dzinogona kuita shanduro yekusika kunze kwekunakidza zvakanyanya.
Webhusi dzinoshandiswa sezotevera backlinks generator
Pano iwe uchawana urongwa hwehutori hwepakombiyuta apo iwe unogona kuwana rusununguko rwekudzokera shure kwemashure munguva pfupi. Ndiri kuzotaura pamusoro pezvinhu zvakakurumbira zvewebhu zvakabva seMicrosoft, Facebook, Google, nezvimwe zvakadaro.
Tisati tatanga kutaura pamusoro pezvinhu izvi, ndinoda kutaura kuti kune marudzi maviri e-backlinks - dofollow uye nofollow. Zvimwe zveP PR zvikwata zvinopa zvose zvekubatanidza -Google, YouTube, uye zvimwe. Pane zvinopesana, dzakadaro dzinoshamwaridzana nhepfenyuro se LinkedIn uye Facebook inobvumira kuvaka chete nofollow backlinks.
Muchidimbu, dofollow backlinks ndeaya anopfuura juice rekugadzira kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe uye anobatsira kusimudzira webhusaiti nechinhu chinonyanya kukosha. Dofollow backlinks inobatsira kuvaka chiremera chechirwere uye kuratidza Google kuti mbiri inowanikwa yewebhu ndeipi. Nofollow backlinks ndiwo hutano husingadariki chero majeji ejusi uye hahuiti kuti peji yako iite. Zvisinei, vanogona kuita kuti profile yako ye backlink isimbise kana yakabva kune-PR yemhando yepamusoro. Microsoft
chitubu chinotakura zvakakosha kune vashandi vanobva munyika yose. Ndicho chikonzero chiine peji yepamusoro. Kuwana zvibvumirano zvisingabvumirwi kubva panzvimbo ino, iwe uchawedzera chiremera chako chechirwere uye uwedzere ruzivo rwewebsite mumaziso eGoogle.
Kuti uite dofollow backlinks kubva kuMicrosoft, unofanirwa kupfuura nhanho dzinotevera:
Ita iyo nhoroondo itsva muMicrosoft.
Pinda uye enda kunhengo yepurogiramu.
Vhura chikwata chechikwata uye uwedzere hukama hwako kune zvakananga zvinyorwa zvekunyorera.
Kupedzisa iyi nzira, tanga pane "Bhokisi".
Google Plus inzvimbo yevanhu vanogara neGoogle. Iwe unogona kuwana zvakakonzera shure kubva kune iri zvinyorwa nekutevera matanho aya:
Enda kuneGoogle Plus uchishandisa account yako Gmail.
Gadzira peji itsva yeblog yako.
Zvino chengetedza peji rako.
Uye pakupedzisira, wedzerai chikwata chako ku URL chikamu.
Kushandura bhokisi re "Save" Source .